U-Ekaterina Kukhar wakhuluma ngobunzima bobuntwana esikoleni se-ballet - Bonisa Ibhizinisi 2022
U-Ekaterina Kukhar wakhuluma ngobunzima bobuntwana esikoleni se-ballet
I-prima ballerina ye-National Opera yase-Ukraine u-Ekaterina Kukhar waba iqhawe lephrojekthi ye-Pozaochi esiteshini se-Inter.
Engxoxweni engagwegwesi nomethuli u-Anastasia Daugula, u-Ekaterina Kukhar wakhuluma ngedrama yakhe siqu, indlela enzima yodumo nokuzidela umndeni wakhe okwadingeka ukwenze ukuze amnike ithuba lokuba isihlabani se-ballet.
Kuyaziwa ukuthi phambilini ezikoleni ze-choreographic kwakukhona ukuzivocavoca okunzima kakhulu. U-Katya omncane naye kwadingeka abhekane nalokho okubizwa ngokuthi "i-pedagogy yokujezisa" esikoleni se-ballet.
Singabizwa ngamagama ahlukene, isibonelo, "izinkomo ezikhuluphele". Ukuze abonise i-ballerina ukuthi yimuphi umsipha lapho kufanele "uvulwe", uthisha weza futhi ngezinzipho ezinde ezicijile waphulula isikhumba ngamandla. Ngemva kwalokho, kwaba nemihuzuko. Manje, kunjalo, umhlaba we-ballet uye phambili, okuhlanganisa ngokuya kwezinye izici zomphakathi, zengqondo. Namuhla basebenzisa ezinye izindlela. Ungachaza ukuthi ungavula kanjani umsipha ofanele ngegama elinembile nelilungile, ngaphandle kokubangela ingane ukulimala komzimba.
- U-Ekaterina Kukhar uyakhumbula
UNadezhda Meikher wabonisa indlela ayebukeka ngayo phakathi nezifundo zakhe esikoleni
UZlata Ognevich wakhuluma ngokwelashwa okungavamile komphefumulo
Umculi uZlata Ognevich, njengosaziwayo abaningi, udinga ukushajwa kabusha ngezikhathi ezithile. Kwenye yezingxoxo zakhe, inkanyezi yathi ukuxhumana nezilwane kumnika amandla
UMarichka Padalko wakhuluma ngamadoda ayinhloko ekuphileni kwakhe
Umethuli we-TV we-TSN we-1 + 1 uMarichka Padalko unikeze inhlolokhono engagwegwesi lapho etshela khona ukuthi ukwazi kanjani ukwakha ubudlelwano obuvumelana nomyeni wakhe u-Yegor Sobolev